Biden ee golaha wasiirada ugu magacaaban waxay balanqaadayaan in laga jabiyo aragtida Trump ee adduunka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Biden ee golaha wasiirada ugu magacaaban waxay balanqaadayaan in laga jabiyo aragtida...
Biden ee golaha wasiirada ugu magacaaban waxay balanqaadayaan in laga jabiyo aragtida Trump ee adduunka
Antony Blinken oo ah xoghayaha arrimaha dibadda ee loo magacaabay ayaa sheegay in Mareykanku uu joojinayo taageerada uu siinayo xoogagga uu hoggaaminayo Sacuudiga ee Yemen, isla markaana uu cusbooneysiiyo heshiiska Niyukleerka Iran.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden magacaabistiisa si ay u hogaamiyaan Waaxyaha iyo Difaaca Waaxda ayaa Talaadadii u sheegay Congress-ka inay raadin doonaan dib u xaqiijinta hoggaanka qaranka ee arrimaha adduunka iyo dib u celinta siyaasadaha maamulka Trump.
Antony Blinken, oo loo magacaabay inuu noqdo xoghayaha arrimaha dibadda ee soo socda ee Mareykanka, ayaa ballanqaaday inuu soo celin doono hoggaanka Mareykanka ee arrimaha caalamiga ka dib afar sano oo uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump.
Mareykanka: Joe Biden Iran ayaa ku jahwareersan 500 erey
‘Astaamaha Iran-al-Qaacida’: Halkan ayaan mar labaad ku nimid
Magacaabista Mareykanka ee ‘argagixisada’ ee Xuutiyiinta Yemen ayaa dhaqan galay
“Waxaan dib u soo nooleyn doonnaa diblomaasiyadda Mareykanka si aan wax uga qabanno ugana qabanno caqabadaha ugu culus ee xilligan jira,” ayuu Blinken u sheegay guddiga xiriirka dibadda ee Senate-ka.
“Hoggaanka Mareykanka wali waa muhiim,” ayuu yiri Blinken, isagoo adduunka ku sifeynaya mid lagu qeexay “qaranimada oo kordhaysa, dib udhaca dimuqraadiyada, loolanka sii kordhaya ee Shiinaha iyo Ruushka, iyo dowladaha kale ee kali talisnimada ah”.
Dhiniciisa, Lloyd Austin, oo loo magacaabay Biden inuu noqdo xoghayaha difaaca, wuxuu u sheegay Golaha Adeegyada Hubka ee Senate-ka in cusbooneysiinta xulafada militariga Mareykanka ee ka dhanka ah Shiinaha ay noqon doonto mid ka mid ah mudnaanta koowaad.
“Waxaan aad u rajeynayaa inaan u baxo dib u habeynta xulafadaas,” Austin ayaa ku yiri su’aalo weydiinta Senator-ka Dimuqraadiga ah Jack Reed, oo sanadkan gudiga qaban doona.
Xoghayaha gaashaandhigga ee la magacaabay Lloyd Austin, oo ah jeneraal guud oo dhowaan hawlgab noqday, ayaa u sheegay Guddiga Adeegyada Hubka ee Senate-ka inuu ka shaqeyn doono xoojinta xukunka shacabka ee millatariga haddii la xaqiijiyo
Markuu Trump ka tago xafiiska Bidenna uu maamul cusub la yimaado Arbacada, Mareykanka wuxuu wajahayaa culeysyo diblomaasiyadeed iyo milatari oo uga yimaada Shiinaha, Ruushka, Iiraan iyo Waqooyiga Kuuriya, Blinken iyo Austin ayaa sidaas yidhi.
Trump wuxuu dabagalay siyaasadii arrimaha dibedda ee “America First” taas oo ka careysiisay xulafada Washington ee Yurub iyo xiriirkii xumaa ee NATO oo qaatay mowqif adag oo ka dhan ah Shiinaha iyo Iran
Blinken wuxuu China u magacaabay caqabada ugu sareysa ee siyaasada arimaha dibada ee Mareykanka wuxuuna sheegay inuu ku raacsan yahay guud ahaan ujeedka hanaanka adag ee maamulka Trump.
“Mabda’a aasaasiga ah wuxuu ahaa mid sax ah,” ayuu yiri Blinken, isagoo intaa ku daray inuu diidan yahay, si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah tallaabooyinka uu Trump qaaday.
“Waa inaan ka bilowno inaan Shiinaha uga dhowaanno dhanka xoogga”, ayuu yiri Blinken, oo u baahan doona “maalgashi milatari si loo hubiyo inaan ka hortagi karno wax kasta oo gardarro ah”.
Siyaasadda Bariga Dhexe
Bariga Dhexe, Blinken wuxuu sheegay in maamulka soo socda ee Biden uu doonayo inuu wax ka dhiso heshiisyadii caadiga ahaa ee uu dhexdhexaadiye ka ahaa Mareykanka ee u dhaxeeyay Israel iyo Imaaraadka Carabta, Baxreyn, Marooko iyo Suudaan.
Blinken wuxuu carabka ku adkeeyay in ka go’naashaha Mareykanka ee amniga Israa’iil ay tahay “mid muqaddas ah” wuxuuna sheegay in xalka labada dowladood, oo muddo dheer udub dhexaad u ahaa siyaasadda Mareykanka ee ku aaddan khilaafka Israa’iil iyo Falastiin, “aad looga hor yimid xilligan”.
Isla waqtigaas, kooxda Biden waxay baari doonaan qaar ka mid ah ballanqaadyadii Trump uu ku dhiirrigeliyey waddammada inay la gaaraan heshiisyadaas Israel, ayuu yiri Blinken. Isaga oo aan sii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxa ay taasi la micno noqon doonto.
Tusaale ahaan, Mareykanku wuxuu u aqoonsaday sheegashada Morocco ee dhulka lagu muransan yahay ee Western Sahara inay qayb ka tahay heshiiskii caadiga ahaa ee Morocco-Israel. Waxay sidoo kale ka saartay Suudaan liiskeeda “dawladaha maal galiya argagixisada” kadib markii dowlada Suudaan ay ogolaatay heshiis u gaar ah oo ay la gashay Israel.
Blinken ayaa sidoo kale ku celisay balanqaadkii Biden ee ahaa inuu joojinayo taageerada Mareykanka ee xulufada uu hogaamiyo Sacuudiga ee dagaalka ka wada Yemen.
Taasi waxay ahayd dalab muhiim ah oo ka yimid sharci dejiyeyaasha Xisbiga Dimuqraadiga, oo sheegaya in ku lug lahaanshaha Washington ee khilaafka halakeeyay ay uga sii dartay xiisad bani’aadamnimo oo horeba u xumayd
Dagaalka Yemen ayaa bilaabmay dabayaaqadii sanadkii 2014-kii markii kooxda fallaagada ah ee Xuutiyiinta ay qabsadeen inta badan dalka, oo ay ku jirto Sanca, caasimada.
Khilaafka ayaa cirka isku sii shareeray bishii Maarso ee sanadkii 2015-kii markii Sacuudiga iyo Imaaraatka carabta ay isku aruursadeen isbahaysi militari oo Mareykanku taageero oo isku dayaya in ay soo celiyaan dowladdii Madaxweyne Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Iran, Blinken wuxuu yiri Biden wuxuu raadin doonaa inuu cusbooneysiiyo heshiiska niyukleerka “heshiis dheer oo xoog leh”. Trump ayaa kaligiis ka baxay heshiiskii nukliyeerka Iran ee 2018 iyadoo maamulkiisa uu ku socday istiraatiijiyad “cadaadis ugu badnaan” oo ka dhan ah Tehran.
Blinken wuxuu yiri dilkii Trump sanad ka hor Jeneraal Qassem Soleimani oo u dhashay Iiraan “wuxuu naga dhigay nabad gelyo yar” gobolka.
Previous articleBiden’s top cabinet nominees promise break from Trump world view
Next articleMadaxweynaha maanta xilka ka degaya ee dalka Mareykanka Donald Trump oo shaqsiyaad Cuna qabateen ku soo rogay
Waxaa maanta ku eg xilligii dowladda Kenya ay u qabatay Qaramada...